Exynos 2100 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Janaayo 12 waxayna noqon doontaa processor-ka qaada Galaxy S21 | Androidsis
Samsung ayaa xaqiijiyay bisha Janaayo 12 waxay ku dhawaaqi doontaa processor cusub oo la yiraahdo Exynos 2100, Chipset-ka ugu sarreyn doona kan cusub Snapdragon 888. Shirkaddu waxay ku muujisay fiidiyow la soo geliyay akoonkeeda rasmiga ah ee YouTube oo ay ku qoran tahay farriinta "Exynos waa soo noqotay", oo loo turjumay "Exynos waa soo noqotay."
Soo bandhigiddu waa laba maalmood ka hor intaan toos loo soo bandhigin taxanaha Samsung Galaxy S21, sedex taleefan oo guuleysan doona Khadadka Galaxy S20 la soo bandhigay bishii Febraayo. Exynos waxay sii wadi doontaa inay qayb ka ahaato tiirka taleefannadooda, sidaasna ku tuurtay inay dhexgalaan processor-kii ugu dambeeyay ee Qualcomm calooshooda.
1 Xogta ugu horreysa ee Exynos 2100
2 Saddexda nooc ee casriga ah ayaa imaan doona laba maalmood kadib
Xogta ugu horreysa ee Exynos 2100
Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay, Qalabka Exynos 2100 ayaa lagu dhisi doonaa 5nm oo leh aaladda 'ARM's X1 core' oo leh laba jibbaar 2,91 GHz, saddex Cortex-A78 oo 2,81 GHz ah iyo afar xargaha Cortex-A55 oo ah 2,21 GHz. suuqa.
Exynos 2100 wuxuu imaan doonaa Yurubta Galaxy S21, Galaxy S21 + iyo Galaxy S21 Ultra iyo Hindiya, sharad kale oo CPU kale ah oo suuqyada kale ah, laga yaabee in loogu talagalay Snapdragon 888. Wadamada ay la gaari laheyd Chipset-ka ugu dambeeyay ee Qualcomm waxaa ka mid ah Shiinaha, Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed, laakiin tan wali lama xaqiijin.
Soo bandhigida processor-ka Exynos 2100 Natiijooyinka ugu horreeya ee jaangooyooyinku way imaan doonaan, si loo arko awoodda ay yeelan doonto iyo haddii ay noqon doonto dhererka tartameheeda. Samsung Galaxy S21s waxay balan qaadeysaa inay soo qaban doonto taleefanadii ugu dambeeyay ee soo saarayaasha telefoonada kala duwan.
Saddexda nooc ee casriga ah ayaa imaan doona laba maalmood kadib
Janaayo 14 waa taariikhda la doortay in la soo bandhigo wadar ahaan seddex terminaal taasi waxay ka dhigi doontaa boodbood fac ah, kaas oo teaser horeba loo soo daadiyay. Marka laga reebo qalabka ayaa la imaan doona shidma Xiinka, qalin y shaashad fidsan, dhammaantood ka dib markii lagu muujiyay muuqaal rasmi ah oo rasmi ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Exynos 2100 waxaa la soo bandhigi doonaa bisha Janaayo 12 waxayna noqon doontaa processor-ka uu qaadi doono Galaxy S21
Sida loo demiyo astaamaha Gmail-ka casriga ah